Chassis Gbanye Manufacturers & Suppliers - China Chassis Gbanye Factory
DCN DCRS-9816 dị elu arụmọrụ waya ọsọ Chassis mgba ọkụ. DCRS-9816 nwere oghere 18, gụnyere oghere nchịkwa 2 na oghere azụmahịa 16. Na-ejighi oru ike ọkọnọ, Fans na management modul, na DCRS-9816 ana achi achi na-aga n'ihu ọrụ na n'ụzọ zuru ezu ejighi oru usoro. Usoro DCRS-9800 na-eje ozi na kọleji na ntanetị data ntanetị chọrọ na ụlọ ọrụ, azụmahịa, na ndị na-eweta ọrụ gburugburu. Njirimara Ngwaahịa na Scalability DCRS-9816 na-akwado ruo ọdụ ụgbọ mmiri 320 * 10G ma ọ bụ ...
DCRS-7600E Series Core Layer Routing Gbanye
DCRS-7600E Series bu DCN chassis cha cha nke oma, nke nwere uzo abuo. 1 DCRS-7604E bụ 4 oghere Chassis Gbanye. Ọ na-akwado ọdụ ụgbọ Ethernet na ngalaba njikwa, nke na-eme ka njirimara dị elu dị elu 2 DCRS-7608E nwere oghere 10. Ọ nwere oghere nchịkwa 2 na oghere azụmahịa 8. Onye ọrụ nwere ike hazie agụba azụmahịa site kpọmkwem chọrọ. Na ejighi oru ike ọkọnọ, Fans na management modul, DCN DCRS-7600E Series ana achi achi na-aga n'ihu ọrụ na n'ụzọ zuru ezu ejighi oru ...
CS16800 Series Cloud Stone Core Layer Routing Gbanye
DCN CS16809 bụ chassis chassis gbanwere iji mezuo ihe achọrọ maka netwọkụ dị oke mkpa na arụmọrụ dị elu, nnweta pụrụ iche na scalability pụtara ìhè. CS16809 na-eje ozi maka kọleji yana data networking network chọrọ, na-akwado ntinye iwu netwọkụ na-agbanwe agbanwe, ma na-ewulite azụmaahịa akọwapụtara maka ndị ọrụ Njirimara na Isi ihe ngosi CLOS Na-enweghị ihe mgbochi CS16809 na-ebuga ọkwa CLOS dị elu, ọtụtụ ntụgharị usoro mgbanwe, nke na-enweta c ...